1.i-automation ephezulu ene-PLC, ukutholwa kwe-photoelectric kokuphakelwa kwempahla eluhlaza ukugwema ukumosha nangokuzinza okuphezulu.
2. ukungenisa ukusika iroli, akukho burr futhi okuhlala isikhathi eside kusetshenziswa
3. Ukondla okokusebenza ngemoto ehlukanisiwe, enembile endlebeni yokulungiswa kwendawo nokulungiswa kwe-welding. ngosayizi omncane, ukusebenza okuqinile nokugqwala nge-aluminium alloy rack rack.
4. 20k ultrasonic indlebe loop Welding, eqinile Welding ingxenye futhi edonsa.
5.Imishini ye-Patent, ubuchwepheshe obuholayo, inqubo evuthiwe, ikhwalithi ezinzile nokusebenza kahle okuphezulu.
Usayizi Womshini 5810 * 2400 * 1700mm
Umphumela 40-45 ama-PC / iminithi
Amandla 5.8 KW
Qaphela Umsebenzi we-Stracking ne-auto packing uyakhethwa
Langaphambilini Umshini we-3D Mask Ear Loop Welding
Olandelayo: Okuzenzakalelayo 3D Mask Machine (ngohlelo lokutholwa kwe-CCD nokupakisha okuzenzakalelayo)